Omar Sayid Abdilahi: January 2016
Maalintii Khamiista ahayd ee 28/01/2016 , waxa aanu qabanay shir weynihii shaqaalaha wasaarada iyo madaarka cigaal oo bil walba khamiista u dambaysa la qaban jaray.
Waxa marti noogu ahaa agaasimaha guud ee Baanka dhexe, iyo Madax ka socota shirkada Telesom oo ay ka mid ahaayeen Cabdiraxmaan Aar iyo Cabdiraxman Shide.
Ajandaha shirku wuxuu ahaa, sidii shilingka Somaliland loo tayayn lahaa, looguna isticmaali lahaa mushaharka shaqaalaha madaarka iyo wasaarada guud ahaan oo dhan $ 100,000.
Waxaan ka jeediyay khudbad dheer, oo qaadatay 7 daqiiqo oo aan diirada ku saaray sida looga gaashaaman karo siciir bararka soo noqnoqday.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 11:52 AM No comments:
Maanta Waxaan ka qayb galay xaflada qalin jabinta iskuulada caalami oo ay ka qalin jabinayeen in ka badan 700 arday.
Iskuulada caalami waxa aasaaasay oo hirgaliyay dhalinyaro aan asxaab iyo isku fac ahayn, oo uu hormuud u yahay Cabdiraxmaan ismail axmed ( Cabdi Seed ) oo ka sokow inaanu isku fasal ahayn aanu ahayn isku kursi iyo saaxiib mudo dheer.
Waxa ka soo qayb galay madax dawlada ka tirsan, culimo, cuqaal iyo arday farabadan.
Waxaan ka mid ahaa marti sharaftii lagu soo casuumay xafladaas, oo aan ka jeediyay khudbad aan ku dhiiri galinayo ardayda guud ahaan, gaar ahaan 700 ee qalin jabinayay.
Waxa marti sharafta ka mid ahaa Sheik Adan Siiro iyo Cali guray oo dawlada aad iyo aad u dhaliila, laakin goobtan kamay sheegin wax dhaliil iyo aflagaado ah oo ku saabsan dawlada.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 12:03 PM No comments:
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:55 PM No comments: